फेसबुकमा 'लाइक' लुकाउनेबारे छलफल हुँदै ! - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
फेसबुकमा ‘लाइक’ लुकाउनेबारे छलफल हुँदै !
एजेन्सी । पछिल्लो समय इन्टरनेट कुलत बनेको छ । यसले व्यक्तिलाई मानसीक रोगी मात्रै होइन अल्पायूमै मृत्युको मुखमा पुर्याउदै आइरहेको छ ।
एक अध्ययनका अनुसार हाम्रो शरीर कम्प्युटर चलाउँदा बस्ने वा मोबाइल चलाउँदा पल्टिने आसनका लागि बनेकै होइन । तर अहिलेको अवस्थामा हामी ग्रामिण क्षेत्रमा पुग्यौं भने पनि मोबाइल नचलाउने व्यक्ति भेट्न मुस्किल छ । हड्डी खिइने, गर्धन दुख्ने, आँखा सम्बन्धि समस्या, मांशपेशी सम्बन्धि दुखाइ लगायतका अनेकन समस्या प्रयाश: हरेक व्यक्तिमा भेटिन थालेको चिकित्सकहरू बताउँछन् ।
युट्युब, फेसबुक, ट्वीटर, ह्वाट्स एप, लगायतका सामाजिक सञ्जालको (कु)लतले निकट भविष्यमै मानिस मनोरोगी हुने पक्कापक्की छ । यसैबीच एक जना इन्जिनियरले फेसबुकको एन्ड्रोइड एपमा लाइक सङ्ख्या लुकाउने कोड परीक्षण भएको पत्ता लगाएपछि विश्वको चर्चित सामाजिक सञ्जालले लाइक सङ्ख्या नदेखाउने उपायबारे विचार गरिरहेको हुन सक्ने बताइएको छ ।
सक्रिय नभएको सो कोड जेन मान्चुन वङले पत्ता लगाएकी हुन् । फेसबुकले क्यानडा र ब्राजिलसहित सात देशमा इन्स्टाग्राममा लाइकको सङ्ख्या नदेखाउने परीक्षण गरिरहेको छ । इन्स्टाग्रामले आफ्नो परीक्षणको परिणाम सार्वजनिक गर्ने बेला नभएको बताएको छ ।
यसै क्रममा फेसबुकले यस विषयमा प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरेको छ ।
के छ कोडमा?
“सामाजिक सञ्जालहरूले सन् २०१४ देखि आफ्नो असर मानसिक स्वास्थ्यमा पर्ने थाहा पाएका छन् र अब फेसबुकले लाइक सङ्ख्या लुकाउने काम सुरु गर्न खोजेको छ,” उनले थप लेखेकी छन्।